Marketingdị ahịa vidiyo nke 2021 | Martech Zone
Vidio bụ otu mpaghara m na-agbali ịrị elu n'afọ a. Emechara m Podcast na nso nso a Owen nke Marketinglọ Akwụkwọ Ahịa Video ọ kpalikwara m itinyekwu mgbalị. M na-ehichapụ ọwa Youtube m n'oge na-adịbeghị anya - ma mụ onwe m ma maka ya Martech Zone (biko denye aha!) M ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ịdekọba vidiyo dị mma yana ime vidiyo vidiyo oge.
M wuru nke m ụlọ ọrụ afọ gara aga na zụrụ a Logitech BRIO Ultra HD kamera yana Ecamm Ndụ. Abụọ na-enye ihe ịtụnanya ndise m ọrụ n'ezie anya nkọ… otú ahụ ka m enweghị ngọpụ ghara! M kwere nkwa na m ga na-arụ ọrụ na ya. O siri ike ijide akwụkwọ, pọdkastị, na azụmaahịa m… mana amaara m na m ga-erite uru site na itinye mgbalị.
Onwere onu ogugu di ike nke na akwado oru ahia ahia vidiyo:
Dị ka ọtụtụ 85% nke ulo oru ejirila vidiyo ahia n'otu uzo ma obu ozo na 2020. Nke ahụ bụ elu 24% site na naanị 4 afọ gara aga.
99% nke ulo oru na eji video afọ gara aga na-ekwu na ha na-eme atụmatụ na-aga n'ihu… ya mere o doro anya na ha na-ahụ uru!
92% nke ulo oru were ya dị ka akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ahịa ha niile.
Ofdị Azụmaahịa vidiyo Ndị Na-ewu ewu
72% nke ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo nkọwa vidiyo.
49% nke ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo ihe ngosi vidio.
48% nke ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo vidiyo nke akaebe.
42% nke ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo vidiyo vidiyo
42% nke ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo mgbasa ozi vidiyo.
Topdị vidiyo kacha elu:
Ojiji vidiyo na-aga n'ihu na-ebili!
Live-gụgharia agala mobile.
Videosdị vidiyo dị mkpụmkpụ na-aga n'ihu na-achịkwa nyiwe niile.
Ihe eji eme ihe nke onye ọrụ na-eme ntinye aka na ntụgharị.
N'ihi ịrụ ọrụ site n'ụlọ na ọrịa ahụ, vidiyo nkuzi na vidiyo ọzụzụ n'ịntanetị na-eto eto nnabata na ewu ewu.
Na 2020, mgbasa ozi vidiyo nọrọ na US kụrụ ijeri $ 9.95. Nke a na-atụ anya na-abawanye site 13 percent ka $ 11.24 ijeri na 2021 (Statista, 2019).
Vidio na-eme mgbanwe, 80% n'ime ha na-ekwu na mbọ ahịa vidio ha emeela ka ahịa buru ibu, 83% kwukwara na ha na-enwetakwu ndu.
A na-ebu amụma ahịa AR na VR ka ọ na-eto n'ime afọ ole na ole sochirinụ ma rute $ 72.8 ijeri na 2024 (Statista, 2020).
Vidiyo Shoppable na-arị elu.
odika asaa n'ime iri Ndi nhazi aghaghi imeghari ihe omume ha na 2020 ka ha buru ndi ozo iji gbochie oria nje a (PCMA, 2020).
Oberlo, ikpo okwu di egwu maka ndi oru itumgbere ahia imuta, wuo ma tolite azụmaahịa ecommerce nke aka ha, nyochara ma debe ozi a zuru oke banyere otu vidiyo vidiyo si aga n'ihu na 2021.
Soro Orberlo n’efu!
Tags: ar vidiyovidiyo impencerVidio AhịaOberloahaziri vidiyovideo ogeakụkọvetikal videoahịa vidiyoọnụ ọgụgụ vidiyousoro vidiyovr vidiyo